Paulinho oo booqday xerada tababarka ee kooxda Barcelona, isagoo dhinaca kale amaanay saddexda xidig ee reer Brazil – Gool FM
(Barcelona) 10 Okt 2018. Laacibka khadka dhexe reer Brazil ee Paulinho ayaa ka faa’ideestay fursada fasaxa kulamada caalamiga ah, wuxuuna booqasho ku bixiyay xerada tababarka ee kooxdiisii hore ee Barcelona.
Paulinho ayaa kula kulmay booqashadii uu maanta ku bixiyay kooxda Barcelona macalinkiisii hore ee Ernesto Valverde iyo qaar ka mid ah ciyaartoyda ay hogaaminayeen Lionel Messi iyo Jordi Alba.
Xidiga reer Brazil ayaa kadib booqashada uu maanta ku bixiyay xerada tababarka ee kooxdiisii hore ee Barcelona wuxuu ka warbixiyay dareenkiisa wuxuuna ka hadlay sida uu ugu faraxsan yahay booqashadan.
“Mudadii aan halkan ku ciyaaray waxaan ku guuleesanay horyaalka La Liga iyo Copa del Rey, waxa aan halkan ku jeclahay ayaa ah xushmada iyo jacaylka dadka”.
“Barcelona marwalba si fiican ayey u ciyaareysaa, markaan awoodo waxaan daawadaa kulamada ay ciyaarayaan, waxay ciyaaraan kulamo aad u fiican”.
“Si wanaagsan ayaan u garanayaa Coutinho wuxuu ku fiican yahay xulka qaranka, iyo mudada aan kasoo wada ciyaarnay kooxda Barcelona, Arthur Melo wuxuu qaab ciyaareed fiican kala soo muuqday kooxda Barca sababa la xiriira tayadiisa iyo falsafadiisa, Malcom wali waa xidig da’ayar ah wuxuuna leeyahay mustaqbal aad u wanaagsan”.
Waxaa xusid mudan in Paulinho uu ugu dhaqaaqay kooxda ka ciyaarta horyaalka Chinese Super League ee Guangzhou xili ciyaareedkii lasoo dhaafay aduun dhan 50 million euros.
Goolkii uu Martial ka dhaliyay Newcastle United wuxuu bad-baadiyay Shaqada Mourinho balse ma Ogtahay inuu Malaayiin Lacago ah ka salfaday Man United....(Sidee!!!????)